Umgaqo-nkqubo waBucala-Funda ukuRhweba
Ubumfihlo bakho bubalulekile. Senze le Mgaqo-nkqubo wabucala ukuze uqonde amalungelo akho njengoMsebenzisi 2 weWebhusayithi yomSebenzi. Sinokwenza utshintsho kumgaqo-nkqubo. Utshintsho luya kufakwa kweli phepha. Kuxhomekeke kuwe ukuba uphonononge lo Mgaqo-nkqubo Wabucala rhoqo kwaye uhlale unolwazi ngalo naluphi na utshintsho olwenziwe kuwo. Siyakukhuthaza ukuba utyelele eli phepha rhoqo. Ngokusebenzisa iwebhusayithi uyavumelana nemigaqo ebekwe kulo Mgaqo-nkqubo Wabucala kunye neMigaqo yokusetyenziswa. Lo ngumgaqo-nkqubo wabucala opheleleyo kwaye ukhethekileyo kwaye uthatha indawo yayo nayiphi na inguqulelo yangaphambili.
Ukuqokelelwa kwedilesi ye-imeyile
Ukubhalisela iwebhusayithi kufuna ukuba ubonelele ngedilesi ye-imeyile, okanye olunye ulwazi olufunekayo ukunxibelelana nawe kwi-Intanethi. Naliphi na idilesi ye-imeyile enikezelweyo inokufikelela kamva, ihlaziywe, iguqulwe kwaye isuswe. Nceda uqaphele, sinokugcina ikopi yazo naziphi na iidilesi zangaphambili ze-imeyile kwiirekhodi zethu.
Idilesi ye-imeyile oyinikezelayo iya kusetyenziselwa ukukuthumelela iincwadana zemihla ngemihla kunye nohlaziyo lwentengiso kwaye ayisayi kusetyenziselwa iinjongo zorhwebo okanye ithengiselwe abantu besithathu.
Olu lwazi lusetyenziselwa ukunceda kunye nokuphucula ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi, ngeenjongo zonxibelelwano, nokuthobela naziphi na iimfuno zomthetho. Siza kusebenzisa olu lwazi ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Ngaphandle kwemvume yakho, idilesi ye-imeyile ayizukuthengiswa okanye ityhilwe kubantu besithathu, ngaphandle kokuchazwa kulo Mgaqo-nkqubo wabucala. Ngaphandle kokuba sinyanzelekile ngokwasemthethweni ukwenza njalo (umzekelo, ukuba sicelwe ukuba senze njalo nguMyalelo weNkundla okanye ngeenjongo zokuthintela ubuqhetseba okanye naluphi na ulwaphulo-mthetho).
Ukuba kukho imfuneko, sinokuveza iinkcukacha zakho ukukhusela amalungelo ethu asemthethweni. Umzekelo, ukuba ulwazi lunxulumene nezenzo zokwenyani okanye ezisongelayo, okanye sinesizathu esivakalayo sokukholelwa ukuba ukuveza ulwazi kuyimfuneko ukuze sihambelane neemfuno zomthetho okanye sihambisane nemiyalelo karhulumente, imiyalelo yenkundla, okanye inkqubo yomthetho ehanjisiweyo kuthi; okanye ukukhusela impahla yethu okanye amanye amalungelo, abasebenzisa iwebhsayithi okanye uluntu. Oku kubandakanya ukutshintshiselana ngolwazi nezinye iinkampani kunye nemibutho ukukhusela ubuqhetseba kunye nokukhusela umngcipheko kumatyala. Ukuba iwebhusayithi iye yafaka iifayile zokungabinamali, yinxalenye yohlengahlengiso, ithengisa iiasethi zayo okanye idityaniswa nenkampani eyahlukileyo, sinokuthengisa ulwazi olunikezwe kuthi ngewebhusayithi kumntu wesithathu okanye sabelane ngolwazi lwakho nomntu wesithathu okanye inkampani esiyidibanisileyo. nge.
Ukuqhagamshela kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kunokuba khona kule webhusayithi. Nokuba iiwebhusayithi ziyafikelelwa ngokusebenzisa amakhonkco kwiwebhusayithi yethu, asinaxanduva lokuziphatha kwabo ngasese okanye umxholo. Ukusetyenziswa kwezi webhusayithi zomntu wesithathu kwenziwa ngokupheleleyo kumngcipheko wakho. Kuyacetyiswa ukuba ujonge ubumfihlo kunye nemigaqo-nkqubo yokhuseleko kuyo yonke iwebhusayithi oyindwendwelayo. Ukucofa kwikhonkco lomntu wesithathu ngokuyintloko kukusa kwiwebhusayithi yomntu wesithathu. Asenzi ukumelwa okanye iwaranti ngokusebenza, umgangatho, ukuba semthethweni okanye ukukhuselwa kwedatha kuyo nayiphi na iwebhusayithi yomntu wesithathu.
Ukuba nangaliphi na ixesha ungathanda ukuba u-2 urhwebe ukucima ulwazi lwakho lomntu kwiziko ledatha ukuze uthumele i-imeyile kuye [imeyile ikhuselwe] kwaye iinkcukacha zakho ziya kucinywa kwisithuba seeyure ezingama-72.
Funda ukurhweba 2 usebenzisa ikuki kwiwebhusayithi yethu ukukhumbula iinkcukacha zakho zokungena. Ukongeza, sisebenzisa ii-cookies zomntu wesithathu njenge-Google analytics ukufunda indlela abasebenzisi abaziphatha ngayo kwiwebhusayithi, kwaye, sisebenzise iMeyileChimp kwimbalelwano ye-imeyile. Yonke ingcaciso eqokelelweyo idityanisiwe kwaye ayichazwanga kwaye isetyenziselwa kuphela ukuphucula ukusebenza kwewebhusayithi. Iicookies esizisebenzisayo azigcini ulwazi lomntu okanye lomntu kwaye azinakulanda umkhangeli wakho.